IDEA MAGAZINE: သူတို့ရပ်ကွက် သူတို့အကြောင်း(၄)
Sunday, October 11, 2009 at 1:16 PM
ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှေ့မျက်စောင်းထိုး နှစ်အိမ်ကျော်တွင်နေသော ဦးအီစမိုင်နှင့် ဒေါ်ဟာစီးနားတို့လင်မယားက ကလေးတွေ တစ်ပြုံကြီးမွေးထားသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်အထင် ပြောရလျှင် ခုနှစ်ယောက်လောက်ရှိမည်ထင်သည်။
စိတ်ထင်ဟုဆိုရခြင်းမှာ တစ်ခါမှ သေသေချာချာ မျက်စိဖြင့်တပ်အပ် ရေတွက်ကြည့်ခွင့်မရသောကြောင့် ဖြစ်၏။ စိတ်အေး လက်အေးတစ်ယောက်ခြင်း ရေကြည့်ခွင့်ရဘို့ကလည်း ခက်ခဲလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း . . . ။
ဟော . . .တစ်ယောက်၊ ဟော . . . တစ်ယောက်ဆိုသလို ပြေးလွှားခုန်ပေါက်ပြီး အိမ်ထဲမှထွက်လာလိုက်ကြ၊ လှစ်ကနဲ လှစ် ကနဲပြန်ဝင်ပြေးသွားလိုက်ကြ၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကျော်လိုက်ကြ ခွလိုက်ကြနှင့် မျက်စိလည်စရာ . . အာရုံနောက်စရာ။ အကြီးဆုံးကလေးနှစ်ယောက်ကမှ လေးတန်းနှင့်သုံးတန်းအရွယ်၊ ကျန်တာတွေအားလုံးက ဘုစုခရုတွေချည်းဖြစ်ကြ၏။
ဒေါ်ဟာစီးနားနှင့် အိမ်ချင်းကပ်နေသည့် ဒေါ်သန်းတင်ကလည်း အားကျမခံ ကလေးခြောက်ယောက်မွေးထား၏။ အားလုံး မျောက်လောင်းလေးတွေချည်းပင်။ အငိုသန် အဆော့သန်နှင့် ကျွမ်းထိုးသူကထိုး၊ သစ်ပင်မှာ တွဲလောင်းခိုသူကခို၊ မသိလျှင် ဆပ်ကပ် အဖွဲ့ကြီး နယ်ပြောင်းလာသလားဟုပင် ထင်ရသည်။
သူတို့မိသားစုနှစ်စုနေရ ထိုင်ရသည်မှာလည်း ခြံဝင်းတစ်ဝင်းကို တစ်ဝက်ပိုင်းကာ ရောင်းထားသော ပေနှစ်ဆယ် ပေခြောက် ဆယ် မြေကွက်ထဲမှာ နှစ်အိမ်ကပ်ပြီး ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်၏။ ဒီတော့ . . ခြံတွေ ဘာတွေလည်း သီးသီးသန့်သန့် ခတ်မနေနိုင်။ ဆယ်ပေမပြည့်တပြည့် အိမ်ခန်းဖွဲ့ထားရသော ၀ါးထရံချင်းပင် ထိလုခမ�န်းကပ်နေ၏။ ဒီဘက် အိမ်ခန်းထဲမှ တီးတိုးပြောသံကိုပင် ဟိုဘက်အိမ်မှ အတိုင်းသားကြားရသည်။
“ဟဲ့ . . မအေ . .၊ နှမ . . ၊ သေချင်းဆိုးလေးတွေ ငါ့မှာ စားဖို့သောက်ဖို့ လုံးပန်းရတာကတစ်ဖက် . . နင်တို့ကို ထိန်းရတာက တစ်ဖက်နဲ့ . . ဟင်း . .သေသာသေလိုက်ချင်တော့တာပဲ”
ဒါက မနက်စောစောတိုင်းမှာ ကြားရတတ်သော ဒေါ်သန်းတင်၏တစ်နေ့တာအစီအစဉ် အဖွင့်မင်္ဂလာသီချ�1��င်ဋ ဒေါ်သန်းရှင် က ဘာစကားပဲပြောပြော အဆဲလေးနှင့် ပြောတတ်သော ၀သီရှိ၏။
တစ်ခါကလည်း ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကို နွားနို့လာရောင်းလေ့ရှိသော ရာကွတ်ဆိုသည့် ငနဲကို ဒေါ်သန်းတင်က လှမ်းခေါ်ပြီး
“ဟဲ့ . . ရာကွတ်၊ ‘ . . . .’ တစ်ဆယ်သား ဘယ်ဈေးရောင်းသလဲ”
မေးတာကတော့ နွားနို့ဝယ်ဘို့ ဈေးမေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒေါ်သန်းတင်က “နို့” “နို့” ဟု ရိုးရိုးမပြောဘဲ သူ့ဝတီ အတိုင်း အဆဲကလေးဖြင့် “နင့်အမေ” ဟု အစချီပြီး ပြောချလိုက်လေရာ ရာကွတ်၏အကြားအာရုံထဲတွင် ထိုးထိုးတွန့်တွန့်ဖြစ်သွား ၏။
ရာကွတ်ကလည်း ဗမာရည်ကိုမွှတ်နေအောင် ပြောတတ်သော ငတိဖြစ်လေရာ . . .
“ဟရေး . . . အမား၊ ချွန်ဒေါ့်ကို ငရဲမပေးပါနဲ့ . .အမား။ ချွန်ဒေါ့်အမေကိုနော် . . ချွန်တော် . . ဘုရားနဲ့တစ်ဂိုဏ်းတည်းထား တယ်။ ဟောဒီမှာ . . နွားနို့နော် . . သောက်ရင်အားရှိဒယ်၊ ကောင်းဒယ်။ အမား ပြောတဲ့ဥစ္စာနော် . . ဟရေး . . တစ်ဝကြီးမကောင်း ဘူး အမား၊ စဉ်းစားပါဦး”
“ဟယ် . . သောက်ရေးထဲ၊ ကမ္မ၀ါဖတ်မယ့် ဒီ “အကောင်” က တစ်မျိုး၊ သွား . . .သွား၊ သေချင်းဆိုး . . ရိုးရိုးတန်းတန်း စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူး”
ဒေါ်သန်းတင်က သူ့စကားကို တည့်တည့်ကြီးအဓိပ္ပါယ်ကောက်ရလေမလားဟု ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်ခါ နွားနို့မ၀ယ် တော့ဘဲ ရာကွတ်ကိုမောင်းထုတ်၏။
စကားလုံးဘာသာအပြန်မှားသော ရာကွတ်ခမျာကား မျက်စိကလေး ကြောင်ကလပ်ကြောင်ကလပ်ဖြစ်ကာ ခေါင်းကို ကုတ်ရင်း တရွေ့ရွေ့ခြေလှမ်းများဖြင့် ဆုတ်ခွာလေသည်။
အဲဒီမြင်ကွင်းကို ခြံရှေ့မြောင်းပေါ်ခွကာ ဆောက်ထားသော ခုံတန်းရှည်ပေါ်ထိုင်ရင်း ဂစ်တာတီးနေသည့် ကျွန်တော်တို့အုပ်စု ကမြင်တော့ ဟားကြ၏။ အစအနောက်သန်သည့် ပန်းချီဆရာကတော့ ရာကွတ်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီး
“အဲဒါကြောင့် . . ဟိုစာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ကပြောတာပေါ့ကွ၊ “အရမ်းဘာသာမပြန်နဲ့” . . . တဲ့ မှတ်ထား . . ရာကွတ်”
“ဟရေး . . ဘာပြောတာလဲ၊ နားမလည်ဘူး၊ ငါ . .ရူးပြီး၊ ငါ . . ရူးပြီ”
(ကျွန်တော်တို့ စာအုပ်သမားအချင်းချင်းလောက်သာ သိမည်ဖြစ်သည်။) အထာစကားကို ရာကွတ်နားမလည်။ စိတ်ရှုပ်စွာဖြင့် သူ့ဆံပင်တွေကို သူထိုးဖွရင်း နွားနို့ပုံးကိုဆွဲကာ ကျွန်တော်တို့နှင့်ဝေးရာဆီသို့ သုတ်ခြေတင်လေတော့သည်။
ဒေါ်သန်းတင်၏ ဆဲရေးသံကိုလည်း နားယဉ်ပါးလျက် . . . ။
တစ်မနက်ခင်းမှာတော့ ဒေါ်သန်းတင်ကို လူကိုယ်တိုင် မမြင်ရဘဲ အိမ်နောက်ဖေးဘက်ဆီမှ တစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာ သော ဆဲသံကိုသာကြားနေရ၏။ မီးဖိုချောင်တွင် ချက်နေပြုတ်နေရင်း အိမ်ရှေ့သို့ ထွက်မလာနိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေ သည့်ကြားက မမေ့မလျော့ တာဝန်ကျေကျေ လှမ်းလှမ်းဆဲနေခြင်းဖြစ်၏။
ဆဲမည်ဆိုလျှင်လည်း ဆဲချင်လောက်စရာ။ အိမ်ရှေ့မြေကွက်လပ် ကျန်းကျန်းကလေးမှာ ကလေးတွေက ဗြောင်းဆန်အောင် ဆော့ကစားနေကြ၏။ တစ်လံသာသာလောက်ပင် မဝေးသော ဟိုဖက်အိမ်ခန်းမှ ဒေါ်ဟာစီးနား၏ ရင်နှစ်သည်းချာကလေးများက လည်း မျောက်ကလေးတွေပမာ ကမြင်းကြောထနေကြသည်မို့ ဒီဘက်က ဒေါ်သန်းတင်၏ “ချစ်စရာ့အရွယ်ကစားကြမယ်” ကလေး များက အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးစိတ်ဓာတ်ကို လက်ကိုင်ထားကာ မီးကုန်ယမ်းကုန် အပြိုင်အဆိုင် “ထကြွ” နေကြခြင်းဖြစ်ပုံရသည်။
အိမ်ရှေ့ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင် ထိုင်နေရင်း မကြည့်ချင်မြင်လျက်သားဖြစ်နေသော ကျွန်တော်ပင်လျှင် သက်ပြင်းကို သုံးမိနစ် တစ်ကြိမ်လောက်ချဖြစ်၏။
ဒဿဂီရိ၏ လင်္ကာဒီပကျွန်းကို မျောက်တွေတပ်နှင့်ချီပြီး စစ်သွားတိုက်စဉ်တုန်းက ယောက်ယက်ခတ်နေပုံမှာ ဒီလိုမျိုးပင်ဖြစ် လိမ့်မည်ဟုလည်း စိတ်မသက်မသာတွေးမိသည်။
“ဗြဲ . . ” ကနဲ အာခေါင်ခြစ်၍ ငိုကြွေးလိုက်သော ကလေးပေါက်စတစ်ကောင်၏ အသံကိုကြားရလေသည်။
ဆော့ရင်းကစားရင်း ကလေးတစ်ယောက်ယောက် ထိမိခိုက်မိသဖြင့် ငိုကြွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပုံရ၏။ ကလေးငိုသံနှင့် မရှေး မနှောင်းမှာပင် ဒေါ်သန်းတင်၏ သူ့ကလေးကိုသူ ဆဲဆိုငေါက်ငန်းလိုက်သံက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပေါ်လာလေတော့ သည်။
“သေချင်းဆိုးလေး . .၊ ဘာဖြစ်ရပြန်ပြီလဲ။ နေဦး . . နေဦး . . ဒီမှာ ငါ ထမင်းအိုးငှဲ့ပြီးတော့မှ နင့်ကျောကို အရေဆုတ်ပစ်ရဦး မယ်”
ဆူပူသံကြောင့် ထင်သည်။ ကလေးငိုသံက ပိုကျယ်လောင်လာ၏။
ဒေါ်သန်းတင်က လူကိုယ်တိုင်ထွက်မလာသေးဘဲ နောက်တစ်ခွန်းထပ်ဆဲသည်။
“ဟဲ့ . . . ကမြင်းတုန်းက ကမြင်းပြီး ခုမှေ-ာက်သံပြဲနဲ့ ငိုမနေနဲ့။ ကျက်သရေမရှိဘူး၊ အခု တိတ်စမ်း”
ထိုအချိန်တွင် ဈေးဝယ်ရာမှ ပြန်ရောက်လာသော ဒေါ်ဟာစီးနားတစ်ယောက်ခြံပေါက်ဝထဲ လှမ်းဝင်ဘို့ပြင်စဉ်မှာ တုံ့ကနဲရပ် သွား၏။
“အီး . . ဟီး . . ဟီး . .၊ ၀ါး . .၀ါး”
ကလေးကတော့ စူးစူးဝါးဝါး ငိုဆဲပင်။
“တယ် . .၊ ဒီ ဖေ- မသားလေးဟာ၊ တိတ်ဆိုတိတ်မဟုတ်ဘူး၊ မွေးကတည်းက သနေကိုယုတ်တယ်”
“အီး . . .အီး . . ၀ါး . .ဟင့် . .ဟင့်”
ကလေးက စီစီညံအောင် ငိုကြောရှည်နေမြဲ။ ခြံဝမှာရပ်နေသော ဒေါ်ဟာစီးနားကလည်း မျက်လုံးကြီးပြူးလျက်။
မဆုံးနိုင်အောင် ရှည်လျားတော်မူသော ကလေး၏ ငိုချင်းသံကို နားကြားပြင်းကပ်လာသော ဒေါ်သန်းတင်က
“ဟဲ့ . . အလေနတောကလေး၊ တစ်ခါတည်း သေသွားရင်လည်း အေးတာပဲ၊ေ-ာက်ငိုကြောက ရှည်လိုက်တာ၊ ကာလနာ တိုက်ပါစေတော်”
ဒေါ်သန်းတင်၏ ပိုးစိုးပက်စက် ဆဲသံဆိုသံအဆုံးမှာပင် ခြံဝရှိ ဒေါ်ဟာစီးနားက ထမီတိုတိုပြင်ဝတ်လိုက်တာ အင်္ကျီလက် မောင်းကို ပင့်တင်ရင်း ခုနှစ်သံချီဟစ်၍ . . .
“အိမ်ထဲကနေ ယုတ်ယုတ်မာမာဆဲနေတဲ့ အယုတ်တမာ မိသန်းတင်ရဲ့၊ ဟင် . . နင် သတ္တိရှိရင် အခုချက်ချင်း အိမ်ထဲကထွက် ခဲ့စမ်း”
ဒေါ်ဟာစီးနား၏ ဒေါသနတကြီးစိန်ခေါ်သံကြောင့် ဒေါ်သန်းတင်ကလည်း လက်ထဲမှ ထမင်းအိုးကိုဆောင့်ခနဲ ပစ်ချပြီး ထရပ် လိုက်၏။
“ငါ့ ကလေးကို ငါဆူတာ ဘယ်ကောင်မကကြားထဲက ၀င်ပြီး အကဲဆတ်နေရတာတုန်း”
ဟူသည့် အတွေးဖြင့် ဒေါသထောင်းထောင်းထပြီး
“စိန်ခေါ်နေတာ ဘယ်ကကောင်မလဲ၊ သန်းတင်တဲ့ . . ငါ့လက်ဝါးက ပါးမရွေးဘူးနော်”
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ဒေါ်သန်းတင်က အိမ်ရှေ့ဆီသို့ လွှားခနဲခုန်ထွက်လာ၏။ အသင့်စောင့်နေသော ဒေါ်ဟာစီးနားကလည်း
“လာစမ်းပါ . . လာစမ်းပါ။ ဟောဒီကလည်း . . ငါ့ကလေး သူ့ဖာသာသူ ငိုတာကို အသားလွတ်ဆဲတဲ့ မိန်းမလူစွမ်းကောင်း ကြီးကို ပါးရိုက်ချင်လွန်းလို့ . . .”
“ဟိုက် . . .”
ဒီတော့မှပင် . . . ဒေါ်သန်းတင်လည်း ငိုနေသည့်ကလေး ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုသည်ကို သေသေချာချာကြည့်မိတော့သည်။
စင်စစ် . . ငိုနေသည်က သူ့ကလေးမဟုတ်။
ဒေါ်ဟာစီးနား၏ကလေး ငိုနေခြင်းသာဖြစ်၏။ အိမ်ခန်းချင်းက ပူးကပ်လွန်းနေတော့ ဟိုဖက်အိမ်က ငိုတာလား။ ဒီဖက်အိမ်က ငိုတာလားဆိုတာကိုလည်း အကွာအဝေးဖြင့် မှန်းဆ၍မရ။
ပြီးတော့ . . . .
မြန်မာကလေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုလားကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် . . ငိုသည့်အခါတွင်တော့ အသံချင်းက အတူတူပဲမဟုတ်လား။
ဒေါ်သန်းတင်တစ်ယောက် မျက်လုံးပြူးပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားပွင့်သွားသည်။ သူ့ခမျာ ကလေးချင်းမှားပြီး ဆဲမိပြီဆိုသည်ကို သဘောပေါက်လိုက်မိချိန်တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် အများကြီး နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။
ဒေါ်ဟာစီးနားက ထမီစ အနားနှစ်ဖက်ကို ဆတ်ခနဲမတင်လိုက်ရင်း
“ငါ့ကလေးက ငိုနေတာကို ညည်းက ဘာကိစ္စသနေယုတ်သလေး ဘာလေးနဲ့ ဆဲရအောင် ညည်းကတော့ ဘယ်လောက် တောင် သနေကောင်းနေလို့လဲဟဲ့ . . ကောင်မရဲ့”
“နင့်အကြောင်း ငါမသိဘူးများမှတ်နေလို့လား၊ နင်ဟာ . . .”
ဒေါ်ဟာစီးနားကား ဒေါ်သန်းတင်၏ ငယ်ကျိုးငယ်နာတို့ကို ဖော်လေပြီ။ အရှက်ကွဲလေပြီ။ ဒီတော့ ဒေါ်သန်းတင်ကလည်း ငုံ့ခံ နေ၍မဖြစ်တော့။ အဆဲကို အဆဲချင်း၊ အကွဲကို အကွဲချင်းတုံ့ပြန်ရာမှ နောက်ဆုံးတွင် လက်ရုံးအားကိုးကြလေတော့သည်။
ဆံပင်ကိုဆွဲကြ၏။ ပါးကိုရိုက်ကြ၏။ ကုတ်၏။ ကိုက်၏။ ဆောင်၏။ ကန်၏။ ဘယ်ဒူး ညာဒူးသုံး၏။ ပတ်တံတောင် ပင့်တံတောင် ရိုက်၏။ ၀ိုက်၏။ ထိုး၏။ ခြေစုံပစ်ဝင်၏။ လှိမ့်ရှောင်၏။ အနီးကပ်၍ တွတ်၏။ လက်ဖျံဖြင့်ကာ၏။ ခုန်ကာ ကုပ်ပိုးကိုထောင်း၏။ ခေါင်း ချင်းတိုက်၏။ ညိုသကျည်းကို ဖြတ်ရိုက်၏။
ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေက ရုတ်တရက်မို့ ဖျန်ဖြေဘို့သတိမရ။ တဟားဟားရယ်လို့သာ နေကြလေတော့၏။
(ဒေါ်သန်းတင်၏ ယောက်ျားဦးမောင်ဝမ်းတစ်ယောက် အရပ်ထဲတွင် ဇာတ်ပွဲကသည့်အကြောင်းကိုလည်း စကားစပ်မိလျှင် ပြောပြရပါဦးမည်။)
This entry was posted on 1:16 PM and is filed under idea story - oct'09 . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .